Denmark oo dib u soo Celineysa Sharuudo ay horay u Qaaday oo Adag
HomeWararka DenmarkDenmark oo dib u soo Celineysa Sharuudo ay horay u Qaaday oo Adag
November 9, 2021 Wararka Denmark, Wararka Maanta Somaliska 0
Dawladda Denmark ayaa doonaysa inay dib u soo celiso shuruudihii looga Dadka Booqnaya, meelaha lagu caweeyo, makhaayadaha iyo xafladaha waaweyn, ayay tidhi raisal wasaare Mette Frederiksen shir jaraa’id maanta.
Sharuudaha waxaa kamid ah in Qofka uu heesto Basaboorka ama Kaarka in uu qaatay Talaalka isagoo markaasi kadib booqanaya goobaha aan soo xusnay.
Sababta ayaa ah faafidda caabuqa ee sii kordhaya ee dalka. Tirada cusbitaalada la seexiyay covid-19 ayaa hadda gaadhaya 303, taas oo ah tiradii ugu badnayd tan iyo badhtamihii February.
Baarlamaanka ayaa go’aan ka gaari doona arrinta berri iyadoo sharciga uu bilaabanayo hadii Barlamaanka uu dhaho ( Haa ).